Baidoa Media Center » Mudaaharaad ballaaran oo goor dhow kusoo idlaaday magaalada Afgooye.
Mudaaharaad ballaaran oo goor dhow kusoo idlaaday magaalada Afgooye.
August 14, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waxaa goor dhow kusoo gaba gaboobay banaanbax ballaaran oo ka dhan ah wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka C/samada Macallin Maxamuud.
Banaanbaxa ayaa waxa uu ahaa mid ay dadka degmada Afgooye kaga cabanayeen xaqdaro ah maamulka gobolka Sh/hoose taasoo uu ku hayo wasiirka arimaha gudaha oo qofkii 11aad ee ay isku hayb yihiin oo uu gobolka usoo magacaabay.
Dadka reer Afgooye ayaa ka cabanaya in dadkii gobolka u dhashay maamulka gobolka ay tiro aad u yar ku leeyihiin halka dad aan gobolka u dhalana tiro aad u badan ku leeyihiin.
15 kamid ah xubnaha maamulka gobolka Sh/hoose ayaa kasoo jeedo beelaha Hawiye ayada oo ay 11 kamid ah 15kaasna isku haybyihiin wasiirka arimaha gudaha kanasoo jeedaan beesha Habargidir, 4 kamid ah xubnaha gobolka Sh/hoose ayaa kasoo jeedo dadkii gobolka u badnaa ee reer Aw Digil halka 1 xubina ay kasoo jeedo beesha Biyamaal ee Direed.
Waxaa la qaban qaabinayaa banaanbax ballaaran oo ay dadka gobolka Sh/hoose ka dhigi doonaan inta badan degmooyinka gobolkaas ayaga oo ku muujin doona cabashadooda.
Banaanbixii maanta oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aad u fara badan kana kala socday xaafaha kala duwan ee degmada Afgooye ayaa si nabadgelyo ah kusoo dhamaaday.